Yan Aung: ဘလော့ဂ်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် အလွယ်ကုဆုံးထည့်သွင်းနည်း
ဘလော့ဂ်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် အလွယ်ကုဆုံးထည့်သွင်းနည်း
ဒီပို့စ်က ဖောင့်သွင်းတာ မပြေလည်သေးသူတွေအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာပါ ခင်ဗျာ.
ဘလော့ဂ်တစ်ခု စလုပ်တဲ့အခါမှာ EOT တွေဘာတွေ မလုပ်ခင် ဒီတိုင်းလေး စရေးနေလို့လည်း ရပါတယ်. ဖောင့်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်သွင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်. ဒီအကြောင်းကို ပို့စ်တစ်ခု ရေးပြီး တင်ပေးခဲ့ပါပြီ. ဒါပေမယ့် မမြင်သာဘူးဖြစ်နေတယ် ထင်လို့ လိုတိုရှင်း ထပ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.
New Blogger Template သုံးနေသူတွေ များလာပြီမို့ အဲဒီ့ Template တွေအတွက်ပဲ အထူးရည်ရွယ်ပြီး အတိုဆုံး ရေးပေးလိုက်ပါမယ်.
Template ပုံစံတွေ မတူလို့ တစ်ချို့ Template တွေမှာ စာကြောင်း ၂ ကြောင်းလောက်ပဲ ပါတတ်ပေမယ့် တစ်ချို့ Template တွေမှာတော့ ၄ ကြောင်းလောက်ပါတတ်ပါတယ်. တစ်ချို့မှာတော့ အောက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အတိုင်း အကုန်ပါတတ်ပါတယ်. အဲဒါတွေကို ခေါင်းခြောက်ခံမနေပါနဲ့.
% ဆိုတဲ့ Sign လေးရဲ့ နောက်မှာ အနီရောင်လေးနဲ့ ပြထားသလို Zawgyi-One လို့သာ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ. ၂ ခါတွေ့ရင် ၂ ခါထည့်ပေါ့ဗျာ
default="normal normal 100% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif" value="normal normal 100% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
default="normal bold 200% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif" value="normal bold 200% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
default="normal bold 100% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif" value="normal bold 100% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
default="normal bold 135% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif" value="normal bold 135% Zawgyi-One, Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
အဲဒါဆိုရင် မိမိဘလော့ဂ်မှာ မြန်မာစာလုံးတွေ ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ. ထပ်ပြောပါမယ်နော်. Template တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူနိုင်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် Idea ကတော့ အတူတူပါပဲ. Bodyfont, headerfont…. ဘာပဲလာလာပါ. အဲဒီ့ % နောက်မှာ အပေါ်မှာ ရေးထားသလိုမျိုး ကြေငြာပေးလိုက်ပါ ခင်ဗျာ.
EOT လုပ်တာကတော့ ကိုယ့်အတွက်ထက် လာဖတ်သူတွေ အတွက်ပါ. ဒါကိုတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နိုင်သလို စာရင်းလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်. My Helpdesk မှာ အကုန်ထည့်ထားပေးပါတယ် ခင်ဗျာ.
လောလောဆယ် EOT နောက်တစ်သုတ်အတွက် ကျွန်တော်မလုပ်ပေးဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါတယ်. ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော် Admin လုပ်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို အရှိန်ရအောင် တွန်းနေလို့ပါ. စာရင်းလေးထဲသာ ထည့်ပေးကြပါ. ကျွန်တော်တွေ့သမျှထိကို EOT ထည့်လုပ်ပေးသွားပါမယ်. ဒါပေမယ့် Font Assign လုပ်တာကိုတော့ အရင်ဆုံး မှန်အောင် လုပ်စေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
I've done according to you. Many thanks.
interest to do but for me is still on the way
thank you for your share knowledge and luck to found your blog
again ko yan aung how can i start to use myanmar font for visiter can read my site ?
it is possible to tell me
and email to me vichan00@gmail.com
hope if i lucky i can meet you @ gtalk or recept your email
>Jelly Aung... Welcome.
>Ko Soe Htet.... Congratulations, You have done very well with assigning font as well as making EOT. Keep it up, Bro!
>Ko Chit Oo... I will invite you to my gmail account.